Daawo Sawirka:- Nin Muslim ah oo abaal marin looga dhigey dhalashada dalka Faransiiska, | Gaaloos.com
Home » Layaab » Daawo Sawirka:- Nin Muslim ah oo abaal marin looga dhigey dhalashada dalka Faransiiska,
Lassana Bathily oo ah 24 jir haysta diinta Islaamka ayaa loo aqoonsadey in uu yahay geesi badbaadiyey dad badan naftood, kadib markii nin hubeysan oo qabsadey Suuq weyn oo ay iska lahaayeen Yuhuudda ku dhaqan Faransiiska todobaadkii hore.
Lassana Bathily ayaa ka shaqeynaayey qaybta hoose ee suuqa Hyper Casher , markii xabaduhu bilaameen 9.1.2015, ayaa dadkii u soo daateen qaybta hoose, iyaga oo ku qaylinaya qof waaalan oo dadka laynaya ayaa Suuqa soo galay.
– Waxaan maqley xabadaha dhacaya, iyo shaqaalihii saaxbiidey ahaa iyo macaamiishii oo dusha iska marey, waan u qayliyey in ay iiymaadaan, kadib waxaan geliyey qolka qaboojinta keydka, waan ku xirey, waxaana u sheegay in aysan qaylin oo ay aamunsaadaan, waxaana demiyey dhamaan nalalkii ayuu yiri, iniguna meel kale ayaan isku qariyey kadibna waan baxsadey ayuu yiri.
Booliska ayaa qabtey Lassana Bathily iyaga oo uga shakiyey in uu wax ka ogaa weerarkan, laakiin saacad kadib ayey siidaayeen, waxaana uu Booliska ka caawiyey in uu sharaxo wixii meesha ka dhacay.
Si loogu aqoonsado in uu yahay Halyeey waxa uu u baahnaa in uu helo Saxiixyo badan, waxaana ilaa hadda saxiixey 300 000 kun oo qof in uu yahay Halyeey.
Lassana Bathily ayaa yimid dalka Faransiiska sanadkii 2006 isaga oo ah 16 jir waxaana uu ka yimid dalka Mali, waxa uu dalbadey dhalashada Faransiis sanadkii 2014 laakiin ma helin.
Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Faransiiska Bernard Cazeneuve ayaa maalintii shalay (Khamiis) sheegay in Bathilys lagu sharfey dhalashada dalka Faransiiska, hadda kadibna loola dhaqmaayo in uu yahay Halyeey.
W/D Khalid Yusuf
Title: Daawo Sawirka:- Nin Muslim ah oo abaal marin looga dhigey dhalashada dalka Faransiiska,
Posted by galmada Net, Published at 8:49 PM and have 0 comments